“ဓာတ်ခွဲခန်းက လွတ်ထွက်လာခြင်း” အယူအဆကို လူပိုသိအောင် အမေရိကန်၏ ထပ်ဖန်တလဲလဲ ပြောဆိုချက်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန် - Xinhua News Agency
COVID-19 ရောဂါသည် “ဓာတ်ခွဲခန်းမှလွတ်ထွက်လာခြင်း” ဟူသည့် အယူအဆကို တရုတ်နိုင်ငံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ဇူလိုင် ၂၁ ရက်တွင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပယ်ချလိုက်ပြီး ယင်းမှာ အခြေအမြစ်မရှိသော အလိမ်အညာဇာတ်လမ်း တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။၂၀၁၉ ခုနှစ်က ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားလေ့လာရေးဆိုင်ရာ ဝူဟန့်အင်စတီကျူ့(Wuhan Institute of Virology) မှ အလုပ်သမား ၃ ဦး နာမကျန်းဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဆွဲကပ်ကာ “ ဓာတ်ခွဲခန်းမှလွတ်ထွက်လာခြင်း” အယူအဆကို လူပိုသိအောင် ထပ်ဖန်တလဲလဲတွန်းတင်ကာ အချို့သော အမေရိကန်အရာရှိများ နှင့် သတင်းမီဒီယာ၏ စွပ်စွဲပြောဆိုနေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နေ့စဉ်ပုံမှန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ မေးမြန်းချက်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျောက်လိကျန်း(Zhao Lijian) က အထက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ အကယ်၍ အမေရိကန်ဘက်က သူတို့ပြောသလိုသေချာတယ်ဆိုရင် သက်သေပြပါ” ဟု ကျောက်ကဆိုသည်။ “ အဲဒီအလုပ်သမားသုံးယောက်ရဲ့ နာမည်တွေကိုပြောပါ ၊ သူတို့ဘာရောဂါဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ ပြောပါ ၊ တကယ်လို့ သူတို့က နိုဗယ်လ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် positive စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီဆေးအဖြေမှတ်တမ်းကဘယ်မှာလဲ” ဟု ၎င်းက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
“ ကျနော်ပြောပါရစေ ၊ အမေရိကန်ဘက်က ဘာသက်သေမှ မပြနိုင်ပါဘူး ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒါက အလိမ်အညာဖြစ်နေလို့ပါပဲ ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ မူလအရင်းအမြစ်ကို လေ့လာရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံကို နာမည်ဖျက်ဖို့နဲ့ အပြစ်ပုံချဖို့ လုပ်ဆောင်ချက်သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ကျောက်က အမေရိကန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးအင်စတီကျူ့သုတေသနပြုချက်အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာကတည်းက အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ပြည်နယ် ၅ ခု၌ ကူးစက်မှုသက်သေခံချက်များရှိနေကြောင်း ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ်အတွင်း ပထမဆုံးအတည်ပြုလူနာထက် စောလျဉ်၍ လူပေါင်း ၁၇၁ ဦးသည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိသော်လည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လက္ခဏာပြခဲ့ကြောင်း ၊ နယူးဂျာစီမြို့တော်ဝန် Belleville သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် ကူးစက်ခံခဲ့ရရာ ယင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး အတည်ပြုလူနာ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းထက် အချိန် နှစ်လ စောနေသေးကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်များစွာတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကတည်းက COVID-19 နှင့် အလားသဏ္ဍာန်အလွန်တူသည့် သွေးလွှတ်ကြောထဲ သွေးတိုးနှုန်းမြန်သည့် လက္ခဏာများရှိသည့် EVALI အဆုတ်ရောဂါမျိုး ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
“ အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်ဘက်က ရှင်းပြနိုင်မလား” ဟု တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျောက်လိကျန်းက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
“Fort Detrick ကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ ပြောတဲ့အခါတိုင်း အဲဒီနိုင်ငံက အမြဲ အသံတိတ်နေခဲ့တယ် ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အမေရိကန်ရဲ့ ဇီဝဓာတ်ခွဲခန်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော်လောက်ရှိတယ် ၊ Fort Detrickမှာ ဘာလျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ထားလို့လဲ ” ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
China slams U.S. of hyping up “lab leak” theory
BEIJING, July 21 (Xinhua) — A Chinese spokesperson on Wednesday once again refuted the COVID-19 “lab leak” theory, saying it is nothing butalie.
Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian made the remarks atadaily news briefing when asked to comment the claim hyped up by some U.S. officials and media that three workers of the Wuhan Institute of Virology fell ill in November 2019, which, according to the allegation, adds to the credibility of the “lab leak” theory.
“If the U.S. side is sure of what it claims, then prove it,” said Zhao. “What are the names of the three workers? What kind of disease did they contract? If it’s saying they tested positive for the novel coronavirus, where is the report?”
“Let me say this: the U.S. side couldn’t show the evidence because it is lying. It is only seeking to demonize and stigmatize China in the name of conducting studies of origins,” said the spokesperson.
Zhao pointed out that, according to the U.S. National Institutes of Health, research has shown that evidence of infection in five U.S. states appeared back in December 2019. In Florida, 171 people with no travel history to China had coronavirus symptoms earlier than the state’s first reported case. The mayor of Belleville, New Jersey, got infected in November 2019, over two months earlier than the first confirmed case in the United States. The EVALI outbreak that swept through several U.S. states in July 2019 cause pulmonary symptoms highly similar to those of COVID-19.
“Can the U.S. explain these?” he asked.
“The country always clams up whenever there isacall foraWHO investigation into Fort Detrick and the 200-plus U.S. biological laboratories overseas. What dark secrets are hidden out of sight at Fort Detrick?” the spokesperson added. Enditem